ကုသ/ကာကွယ်/ဆေးခုံဌာနခွဲ – Department of Medical Service
Department of Medical Service
COVID 19 Virus News
Guidelines for Hemodialysis in Covid-19 Pandemic Era (Version 01)
General principles ▪ Hemodialysis patients are immunocompromised and highly susceptible populations. Hemodialysis centers areahigh-risk area in terms of COVID-19. ▪ All medical staffs, HD patients, and their caregivers should be educated about personal hygiene, including washing hands, wearing masks, and avoiding unnecessary contact. ▪ Surgical masks and hand sanitizer should be available at … Read more
Safe Surgery in COVID-19 Pandemic Era(Version 01)
Video Conferencing on Hospital Preparedness for COVID-19 ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးဆောင်၍ Video Conferencing on Hospital Preparedness for COVID-19 ကို ၂၀၂၀-ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ကုသရေး) ဒေါက်တာသီတာလှ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(ကုသရေး) ဒေါက်တာမိုးခိုင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ဗဟိုအဆင့်ဆေးရုံများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးများမှ ဆေးရုံအုပ်ကြီးများ တက်ရောက်ခဲ့ ကြပါသည်။ အဆိုပါ Video Conferencing တွင် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကုသရေး) ဒေါက်တာသီတာလှ က ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ COVID-19 ရောဂါ ကုသရေး/ကာကွယ်ရေးအတွက် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို အရှိန်အဟုန်မပြတ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်စေလိုပါကြောင်း၊ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဆန်းစစ်၍ တင်ပြရန်နှင့် ဖြည့်ဆည်းရန် … Read more
SARI treatment for Medical Officers ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
ကျန်းမာ‌ရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ Online training on SARI Treatment for Medical Officers in the COVID-19 frontline ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေလ (၂၉)ရက်နေ့မှ စတင်၍ တစ်ရက်လျှင် တစ်နာရီခွဲ၊ တစ်ပတ်လျှင် (၂)ရက် နှုန်းဖြင့် သင်တန်းချိန် (၈)ချိန် သင်ကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းတွင် WHO Regional Office for South-East Asia မှ ကျွမ်းကျင်သူ ဆေးပညာရှင်များက သင်တန်းဆရာများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ကြပြီး ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)ရန်ကုန်မှ ပါမောက္ခ/ဌာနမှူး(ဆေးပညာ) ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်လင်းအောင်၊ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်း ဆေးရုံကြီးမှ တွဲဖက်ပါမောက္ခ(ဆေးပညာ) ဒေါက်တာဟိန်းရာဇာအောင်၊ မြောက်ဥက္ကလာပ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှ တွဲဖက်ပါမောက္ခ(ဆေးပညာ) ဒေါက်တာအောင်ကျော်သူတို့က Facilitator … Read more
© 2021 Department of Medical Service • Built with GeneratePress